Ukurhweba ngokuzenzekelayo ngeNzuzo enkulu! - Funda nge-2 yoRhwebo ngoJanuwari 2022
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2021 kuRhwebo oluzenzekelayo!
Into yokuthengisa ngokuzenzekelayo ikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iiasethi ngoncedo lwealgorithm. Ngamanye amaxesha, irobhothi yokurhweba ngokuzenzekelayo inokuskena iimarike zezemali zikhangela amathuba okurhweba, emva koko zikuthumele umqondiso onolwazi lokuba yeyiphi iodolo yokubeka.
Ngamanye amaxesha, iqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo linokubonelela ngenkonzo ezimeleyo ye-360-ethetha ukuba ialgorithm iya kuthengisa egameni lakho. Nokuba yeyiphi na indlela oziva ukhululeke ngayo, kubalulekile ukuba wenze uphando kumboneleli wezorhwebo ngaphambi kokuba uhlukane nemali yakho.
Emva kwayo yonke loo nto, uninzi lweshishini lulawulwa ngamagcisa obuqhetseba enza amabango amakhulu anesibindi kwinani leenzuzo 'eziqinisekisiweyo' onokuthi uzenze. Kwesi sikhokelo, siphonononga ii-ins kunye nokuphuma kwendlela urhwebo oluzenzekelayo olusebenza ngayo, kunye nento ekufuneka uyenzile ukufumana ababoneleli ababalaseleyo be-2021.
Qaphela: Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba uyakwazi ukuqinisekisa amabango ezinga lokuphumelela komnikezeli wakho wezorhwebo omkhethileyo. Oku kunokuba kwifom yeakhawunti yeedemo, isilingo sasimahla, okanye isiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
Ngamafutshane, ukuthengisa ngokuzenzekelayo yinkqubo yokuthenga nokuthengisa izixhobo zemali ngendlela ezenzekelayo. Kwimeko ezininzi, uya kuba uxhomekeke kwi-algorithm esele icwangcisiwe exhaswa yi-AI okanye ukufunda ngomatshini. I-algorithm iya kuthi ke ijongane nokuskena iimarike zezemali- nokuba yey-forex, izitokhwe, izinto zorhwebo, okanye ii-cryptocurrensets- zikhangela amathuba okurhweba. Ukuba kwaye xa isoftware yorhwebo yenza kanye loo nto, iya kujonga ukwenza imali ngokwenza urhwebo oluchasene nomngcipheko.
Umzekelo, masithi i-bot yokuthengisa ngokuzenzekelayo inoxanduva lokuphanda ngababini be-forex eziphambili njenge-EUR / USD. Ngoncedo lwezalathi eziphambili zobuchwephesha ezinje ngeeBollinger Bands kunye ne-RSI, i-auto bot inokucwangciswa ukubeka i-oda yokuthenga xa isibini sidlulile. Oku kunombono wokuthenga i-asethi xa-kulungelelwaniso lwamathuba, ukulungiswa kwemakethi kusondele. Xa i-algorithm ichukunyisiwe, iya kuqinisekisa ukuba i-EUR / USD kufuneka ithengiswe ngexabiso lokungena elingu-1.105.
Kuxhomekeke kudidi lokubonelela ngokuthengisa ngokuzenzekelayo, i-bot inokukuthumelela isiginali yexesha lokwenyani eneenkcukacha zeziphumo zayo, kunye nokungena kunye nokuphuma kwamaxabiso eodolo ekufuneka ebekwe. Uya kuba nakho ukuphanda umqondiso ngokwakho, okanye uqhubeke ngokubeka ii-odolo. Ngenye indlela, umboneleli wentengiso oluzenzekelayo unokubonelela ngenkonzo yonke, oko kuthetha ukuba ukungena kunye nokuphuma kweeodolo kuya kubekwa endaweni yakho.
Ukuba ngaba kunjalo, uza kurhweba ngendlela ekhawulezileyo- ngaphandle kwemfuneko yokuba ubenazo naziphi na izakhono okanye amava kwiimarike zezemali. Ngokubanzi njengoko i-bots yokuthengisa ngokuzenzekelayo inokuba yeenjongo zakho zotyalo-mali lwexesha elide, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba indawo eninzi ilawulwa ngababoneleli bobuqhetseba. Oko kukuthi, ngelixa umboneleli enokuthembisa ukubuya 'okuqinisekisiweyo' kwe-90% okanye nangaphezulu, oku kunqabile ukuba kube njalo. Kananjalo, kubalulekile ukuba wenze umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya ngaphambi kokuba uthenge iirobhothi zorhwebo okokuqala.
Zithini i-Pros kunye ne-Cons of Auto Trading?
Rhweba ngeemarike zezemali ngaphandle kwe-intshi yolwazi malunga nendlela utyalo-mali olusebenza ngayo
Ukufezekisa ukuba awunaxesha lokurhweba
Inika ithuba lokufumana umvuzo ongeniso
Iibhothi ezizenzekelayo zinokurhweba phantse ngalo naluphi na udidi lweeasethi
Abanye ababoneleli banikezela ngenkonzo ezenzekelayo
Itekhnoloji esisiseko ihlala iphakamileyo kakhulu kubarhwebi abangabantu
Uninzi lwamabango ehabaxa enziwe ngababoneleli
Kuphela linani elikhethiweyo lamaqonga asemthethweni kwisithuba
Iindidi zababoneleli ngeeNtengiso
Ke ngoku ukuba uyazi iziseko zokuba yintoni urhwebo oluzenzekelayo, ngoku siza kudiliza iintlobo ezahlukeneyo zabanikezeli abasebenza kwimarike.
Ukurhweba ngokuSemi ngokuZenzekelayo ngeeMpawu
Xa sibhekisa kubanikezeli beshishini lokuthengisa ngokuzenzekelayo, ezi ngamaqonga azenzekelayo, kodwa ayizizo zonke, zenkqubo yotyalo-mali ukuya esiphelweni. Kwimeko ezininzi, semi-auto yorhwebo ntengiso Amaqonga anikezela ngeziphakamiso zorhwebo ngemiqondiso. Masithathe iAlgorithm yorhwebo 2 njengomzekelo ophambili. Itekhnoloji esisiseko-exhaswa yi-algorithm ephezulu kakhulu, iskena ifayile ye- Forex yorhwebo nakwiimarike zemali yedijithali kwi-24/7. Nje ukuba ialgorithm ifumane ithuba lokwenza imali, iya kuthi emva koko ithumele umqondiso kumalungu enkonzo.
Umzekelo, umqondiso unokuqulatha olu lwazi lulandelayo:
Ixabiso: BTC / USD
Isiginali: I-RSI iphakamisa indawo esebenzileyo
Ukuphulukana nokupheliswa: $9,980
Thatha Inzuzo: $9,410
Njengoko ubona kulo mzekelo ungasentla, iipesenti ezingama-90 zenkqubo yotyalo-mali ukuya esiphelweni yenziwe ngokuzenzekelayo. Kungenxa yokuba umrhwebi kwakungafuneki ukuba enze uphando kwiimarike zemali. Endaweni yokuba le nxalenye yenkqubo yabelwa kwi-algorithm esele icwangcisiwe.
Nje ukuba uphawu lufunyenwe ngumrhwebi, emva koko banokukhetha izinto ezintathu. Umrhwebi angakhetha ukuphanda iziphumo ngokwakhe ngaphambi kokubeka urhwebo; beka urhwebo kwangoko; okanye ngokulula ungabeki msebenzi kwaphela. Ngokubalulekileyo, olu hlobo lwenkonzo yokuthengisa ngokuzenzekelayo lufanelekile kwabo bafuna ukuxhamla kubuchule obuphambili be-AI kunye nokufunda ngomatshini, kodwa kwangaxeshanye, banento yokulawula ishishini lakho.
Ukuthengisa okuzenzekelayo ngokupheleleyo
Njengoko igama lisitsho, ababoneleli abazenzekelayo bayikhathalela yonke inkqubo yotyalo-mali ukuya esiphelweni. Oko kukuthi, xa imali yakho ityalwe kumboneleli, awuyi kucelwa ukuba wenze enye into.
Ngokwezinto ezisisiseko, inkqubo yophando isebenza ubukhulu becala ngokufanayo naleyo besiyixubushe kwicandelo elingentla, ukuze iteknoloji ijonge ukuyifumana. urhwebo usuku amathuba ubusuku nemini. Nangona kunjalo, umahluko ophambili kukuba xa sele lifunyenwe ithuba nge-algorithm, iya kuqhubeka ukubeka urhwebo egameni lakho.
Kwelinye icala, olu khetho lulungile ukuba awunalo ulwazi okanye amava kwiimarike zezemali. Kungenxa yokuba awuyi kucelwa ukuba wenze uphando ngeempawu zokuthengisa ezifunyanwa yi-algorithm. Endaweni yokuba ubeka i-bot kwindawo yokuthenga kunye nokuthengisa ii-odolo zakho. Kwelinye icala, kuya kufuneka uqiniseke ukuba inkonzo yorhwebo oluzenzekelayo isemthethweni. Emva kwakho konke, awufuni ukuba kwindawo apho i-bot ibeka ukulahleka kwezorhwebo emva kokuphulukana norhwebo.
Inketho yesithathu onayo kukusebenzisa inkonzo yokuthengisa isipili. Kulapho ukhetha khona umtyali mali onamava onengxelo eqinisekisiweyo yeemarike zezemali, emva koko ukope iipotifoliyo zabo ezifana nokuthanda.
Uyakube ubeka esipilini nakuphi na ukurhweba okuza kwenziwa ngumntu. Oku kukuvumela ukuba uzuze kwizakhono zomrhwebi onamava kakhulu, ngelixa kwangaxeshanye kungafuneki ukuba uqonde ukuba utyalomali lusebenza njani.
Ngale ndlela, ukuthengisa isipili kusalandela imigaqo-nkqubo efanayo nokuthengisa okuzenzekelayo okusekwe kwi-AI, njengoko yonke inkqubo iyenziwa. Ngokwababoneleli, amaqonga afana ne-eToro akuvumela ukuba ukope urhwebo kunye notyalo-mali oluncinci lwe- $ 200, kwaye ufumana ukophuka ngokupheleleyo kwirekhodi yomrhwebi wembali yomzi kwindawo.
Ngenye indlela, unokufuna ukuqaphela umboneleli weakhawunti ye-PAMM. Kulapho imali yakho idityaniswe kunye nomrhwebi oyingcali. Umrhwebi uya kuthi emva koko athenge kwaye athengise ii-asethi egameni lakho. Ukubuya, baya kufumana ikhomishini kuyo nayiphi na inzuzo abayenzele yona.
Zeziphi iiasethi endinokuzithengisa ngokuzenzekelayo?
Ubuninzi bendawo yokuthengisa ngokuzenzekelayo ilawulwa yi-forex kunye ne-cryptocurrencies. Kungenxa yokuba zombini iiklasi zeeasethi zishishina nge-24/7, kwaye bobabini bayazuza kwimfumba yokuthengiswa kwemali kunye nokuthengiswa kwexabiso. Ngale nto ithethwayo, kukho amaqonga orhwebo oluzenzekelayo agubungela uninzi lweeklasi zeeasethi. Oku kubandakanya yonke into esuka kwisitokhwe, ii-indices, amandla, isinyithi esomeleleyo, amaxabiso enzala kunye neebond.
Ngokubalulekileyo, kungcono ukhethe i-bot yokuthengisa ngokuzenzekelayo ebandakanyekayo kudidi lweeasethi oziva ukhululekile ukurhweba kuzo. Umzekelo, ukuba ujonge ukufumana ukubonwa kwindawo ye-forex yesigidi sezigidi, kungcono ukunamathela kumboneleli ojolise kwiimali ezinkulu nezincinci.
Lusebenza njani utyalomali oluzenzekelayo?
Xa kuziwa kwinkqubo yotyalo-mali, konke oku kuxhomekeke kuhlobo lwenkqubo yorhwebo oluzenzekelayo onqwenela ukulusebenzisa. Ngale nto ithethwayo, uninzi lwabafundi bethu lukhetha ukusebenzisa inkonzo yorhwebo oluzenzekelayo, kuba akukho mfuneko yokwenza uphando okanye ukubeka iiodolo.
Kananjalo, la manyathelo alandelayo akubonisa ukuba utyalomali luya kusebenza njani xa usebenzisa umboneleli wezorhwebo onikezela ngenkonzo ekuyo yonke into.
Isixa esincinci soTyalo mali
Okokuqala nokuphambili, kuya kufuneka uhlangane nesixa esincinci sotyalo mali ukuze usebenze ngenkonzo yokuthengisa ngokuzenzekelayo. Isixa esithile sinokuhluka kakhulu ngokuxhomekeke kumboneleli kunye nohlobo lweakhawunti olikhethayo. Kwiimeko ezininzi, sifumanisa ukuba iidipozithi ezincinci ziqala nge- $ 250.
Yenza iNkonzo yokuZenzekelayo
Umboneleli wezorhwebo ngokuzenzekelayo uya kuthi emva koko afumane isigunyaziso kuwe. Oku kuqinisekisa ukuba wonwabile ngomboneleli wokuthenga kunye nokuthengisa iiasethi endaweni yakho. Ukuba awuwenzi umsebenzi ozenzekelayo, uya kufumana ngokulula imiqondiso Forex. Uya kuthi emva koko wenze isenzo ngokwakho.
✔ Cwangcisa iiparameter zoRhwebo
Uya kuthi emva koko usete ezinye iiparameter zorhwebo. Emva kwayo yonke loo nto, ngekhe ufune ukuba bot ithengise yonke imali eseleyo kwi-odolo enye. Kananjalo, ngenisa elona xabiso liphezulu onqwenela ukulibeka kumqondiso ngamnye. Umzekelo, masithi ubeke i-1,000 yeedola eqongeni. Ukuba awufuni ukubeka umngcipheko ngaphezulu kwe-5% yemali eseleyo kwintengiso nganye, qiniseka ukuba uyakucacisa oku.
Uya kuba nenkululeko yokungena kwithahleko zokumisa kunye neethagethi zenzuzo. Umzekelo, usenokungafuni ukulahlekelwa ngaphezulu kwe-3% kurhwebo ngalunye. Ngokufanayo, unokufuna ukujolisa kwinzuzo ye-5% kurhwebo ngalunye, kwaye uvale indawo xa oku kubangelwa. Ngale nto ithethwayo, kunokuba kungcono ukushiya ungeniso olucetyisiweyo kunye nokuphuma kwamaxabiso kwi-algorithm.
✔ Ukujonga kweentaka-Amehlo
Urhwebo ngalunye oluthi lubekwe kwindawo yentengiso yemoto endaweni yakho luya kucaca gca ngaphakathi kwe-akhawunti yakho. Ayikuvumeli nje kuphela ukuba ulinganise ukuba yimalini oyenzayo okanye olahlekileyo, kodwa okona kubalulekileyo- nokuba ingaba i-bot ilungile na kwiimfuno zakho zobuqu. Nokuba ibot is Ukwenza imali elungileyo, unokufumanisa ukuba izicwangciso zayo ziyingozi kakhulu ekuthandeni kwakho.
Uninzi lwamaqonga orhwebo oluzenzekelayo kwisithuba likuvumela ukuba urhoxise imali yakho kwaye xa ubona kufanelekile. Kubaluleke kakhulu ukuba ukumisele oku ngaphambi kokuba ubhalise, njengoko ungafuni ukuba imali yakho ivalelwe ixesha elincinci lokuhlawulela.
Nje ukuba ucele ukurhoxa, imali iya kubuyiselwa kwindlela yakho yokuhlawula zingaphelanga iintsuku ezimbalwa.
Ukwenza imali kwiQonga lokuThengisa ngokuZenzekelayo
Xa kuziwa ekwenzeni imali kwiqonga lakho lokuthengisa elizenzekelayo, oku kuxhomekeke kwi-ROI (buyela kutyalo-mali). Ayisiyonto ilula njengokuphinda-phinda utyalomali lwakho ngenqanaba lokuphumelela, njengoko kuxhomekeke ekubeni kubekwa malini kurhwebo ngalunye. Ngamanye amagama, ukuba ufaka i-250 yeedola eqongeni, i-bot ayizukubeka i-250 yeedola kurhwebo ngalunye olwenzayo. Endaweni yoko, inokwaba iipesenti ezi-1-2 kurhwebo lomngcipheko ophakathi ukuya phezulu, kunye neepesenti ezingama-3-5 kurhwebo lomngcipheko ophakathi ukuya kweliphakathi.
Umzekelo, masithi ubeka i $ 5,000 kwiqonga elinikezela ngenkonzo yorhwebo oluzenzekelayo.
Umngcipheko we-bot yi-5% kurhwebo 1, efikelela kwi-250 yeedola. Urhwebo lwenza inzuzo ye-4% ($ 10)
Umngcipheko we-bot yi-2% kurhwebo 2, efikelela kwi-100 yeedola. Urhwebo lwenza inzuzo ye-30% ($ 33)
Umngcipheko we-bot yi-1% kurhwebo 3, efikelela kwi- $ 50. Urhwebo lulahlekelwa yi-1.5% ($ 0.75)
Njengoko ubona koku kungasentla, i-bot yenze i-10 kunye ne-33 yeedola kuthengiso 1 no-2, emva koko yaphulukana ne-0.75 yeedola kurhwebo. Ngokwe-ROI yakho, oku kufikelela kwi-3%. Nangona eli nani linokuvakala lilincinci, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba oku kuhambelana nezinto ezintathu kuphela.
Iirobhothi zokurhweba ngokuzenzekelayo zihlala zibeka uninzi lwentengiso ngemini, ngenxa yoko iinzuzo zakho zinokuqala ukudibanisa. Ngokucacileyo, le mizekelo ingentla ibalaselisa ubuchule bokuqonda umngcipheko apho kungekho ngaphezulu kwe-5% yepotifoliyo ebibekelwe urhwebo olunye. Ukuba ufuna ukuhamba ngakumbi nokugcina oku, ucutha ipesenti yolwabiwo oluphezulu nangakumbi.
Ixabisa malini iRobhothi yokuZenzekelayo?
Kwakhona, akukho mgaqo unzima kwaye ukhawulezileyo malunga nokuba uza kuhlawula malini kwinkqubo yorhwebo, njengoko inokwahluka kakhulu. Ngale nto ithethwayo, uninzi lwababoneleli esicebisa ukuba basebenze kwimodeli esekwe kwikhomishini. Oku kuthetha ukuba iqonga liza kufumana ipesenti yentengiso nganye ephumeleleyo abayenzayo egameni lakho.
Umzekelo, masithi umboneleli wakho omkhethileyo unenqanaba le-10% lekhomishini:
Utyala imali eyi- $ 2,000 kwiqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo
Iqonga lenza urhwebo lwe-100 kuyo yonke inyanga
I-ROI ifikelela kwi-15%, elingana ne- $ 300
Iqonga liza kuthatha ikhomishini ye-10%, eyi- $ 30
Oku kukushiya une- $ 270 kwiinzuzo
Singatsho ukuba ulwakhiwo lwekhomishini njengoko luchaziwe apha ngasentla lolona hlobo lwamaxabiso lufumanekayo kuwe. Isizathu esiphambili soku kukuba iqonga lenza imali kuphela xa benenzuzo. Kananjalo, umboneleli ukhuthazekile ngokwasemalini ukuba abeke umngcipheko wokurhweba egameni lakho, ngenjongo yokwandisa i-ROI yakho. Ngokubalulekileyo, kokukhona iqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo lenzela wena, kokukhona bezenzela.
Ungayikhetha njani indawo yokuThengisa ngokuZenzekelayo
Ngaphandle kwesithunzi sokuthandabuza, elona candelo linzima lenkqubo yokurhweba ngokuzenzekelayo kukufumana umboneleli onokuthenjwa. Njengoko siqaphele kwisikhokelo sethu, uninzi lwababoneleli kwisithuba baya kuthi benze ukubuyiswa kwamanani aphindwe kabini. Akukho nto injengenzuzo eqinisekisiweyo kwiimarike zezemali, njengoko nezona zindlu zorhwebo ziphumeleleyo emhlabeni ziya kuba nenyanga ezilahlekayo ngamanye amaxesha. Olu luhlobo nje lomdlalo.
Kananjalo, kukho inani lezinto ekufuneka uzijongile xa ukhetha iqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo.
Eyona metric ibalulekileyo ekufuneka ujonge kuyo kukuba ingaba unayo na amandla okuqinisekisa ireyithi yokuphumelela ebhengezwa ngumboneleli. Umzekelo, ukuba besikuxelele ukuba singakwenzela i-ROI eqinisekileyo ye-40% ngenyanga, ungazi njani ukuba besithetha inyani? Kwiimeko ezininzi, awuzuku-kuba awuzukufikelela kurobhothi othengisa ngokuzenzekelayo ude wenze utyalomali.
Kwelinye icala, siyaqonda ukuba kutheni ababoneleli bengashicileli iziphumo zabo zorhwebo kwimbali yoluntu. Kungathatha iminyaka emininzi ukugqibezela ialgorithm esezantsi, ke kufanelekile ukuba iqonga alifuni ukuba olu lwazi luhanjiswe ngokukhululekileyo. Kwelinye icala, umboneleli kufuneka afakele inani lezikhuselo ezikuvumela ukuba uqinisekise ukusebenza kwenkonzo ngaphambi kokwenza imali eninzi.
Umzekelo, ukuba iqonga libonelela ngeakhawunti yedemo, oku kuyakuvumela ukuba uvavanye uphawu ngalunye ngaphambi kokubeka emngciphekweni imali yakho. Kukwaphawuleka ukuba umboneleli unikezela ngesilingo sasimahla okanye isiqinisekiso sokubuyiselwa imali, kuba oku kuyakuvumela ukuba urhoxe kutyalo-mali lwakho ngokuthe ngqo kwimeko apho ungonelisekanga.
Udumo kunye neTrust
Enye yeendlela ezilungileyo zokulinganisa ukuthembeka kwerobhothi yokuthengisa imoto kukwenza ngokwakho umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya. I-intanethi igcwele ngokujongwa kunye nokulinganiswa kweenkonzo zokuthengisa ngokuzenzekelayo, ke uya kufumana ukutya kumava abasebenzisi bangoku nabangaphambili. Ukuba ukuvumelana ngokubanzi kukuba irobhothi yokurhweba isebenza kakuhle, eli sisiqalo esihle.
Kuya kufuneka uphinde uvavanye ukuthembeka komboneleli uqobo. Umzekelo, ngubani osemva kwerobhothi yokuthengisa ngokuzenzekelayo, kwaye lide kangakanani iqonga lishishini? Ngaba ikhona indlela yokuthetha nomboneleli ngefowuni, okanye ngaba yonke into ifuna ukuhamba nge-imeyile?
Uninzi lwabanikezeli bokuthengisa ngokuzenzekelayo kwisithuba sibonelela ngenkonzo esekuhleni ngokupheleleyo. Ngale nto, sithetha ukuba uza kujonga urhwebo ngalunye olwenziwa liqonga egameni lakho. Ngobaluleko, oku kukunika ukujonga okupheleleyo kweentaka-uhlobo lwengozi kunye neendlela zokuthatha i-bot. Ngale nto ithethwayo, abanye ababoneleli babonisa nje amanani kunye nenzuzo kunye nelahleko, ngaphandle kokuba uyazi ukuba imali oyityalayo iya phi. Singacebisa ukuphepha amaqonga anje.
Iindleko kunye neeKhomishini
Kuya kufuneka uvavanye iindleko zokusebenzisa inkonzo yokuthengisa ngokuzenzekelayo. Singacebisa ukuba ubuye umva kule meko, kuba akufuneki usekele isigqibo sakho kwixabiso. Umzekelo, masithathe amaqonga amabini ahlukeneyo orhwebo oluzenzekelayo-enye ehlawulisa ikhomishini ye-30%, kwaye enye ibiza i-5%.
Ingcinga yakho yokuqala inokuba kukukhetha iqonga elinikezela ikhomishini ye-5%, njengoko ucinga ukuba ibonelela ngexabiso elikhulu. Nangona kunjalo, oku akunakuba kunjalo. Umzekelo, kuthekani ukuba umboneleli obiza kakhulu wenza imbuyekezo eyi-avareji ye-20% ngenyanga, ngelixa iqonga elibiza iindleko lingumyinge we-3%?
Ewe, masikhawuleze sithathe amanani-ngokusekwe kutyalo-mali lwe- $ 10,000
Umboneleli 1 wenza ukubuya kwe-3%, oko kuthetha ukuba utyalo-mali lwakho lwe- $ 10,000 luvelisa i-300 yeedola ngenyanga. Umboneleli uhlawulisa iipesenti ezintlanu kwikhomishini, ke uyahamba nge- $ 5 kwinzuzo.
Umboneleli wesi-2 wenza ukubuya kwama-20%, okuthetha ukuba utyalo-mali lwakho lwe- $ 10,000 luvelisa i $ 2,000 ngenyanga. Umboneleli uhlawulisa i-30% kwi-khomishini, ke uhamba nge-1,400 yeedola ngenzuzo.
Njengoko ubona kulo mzekelo ungasentla, ungcono kakhulu ukukhetha umboneleli ohlawulisa ikhomishini ephezulu ngokubuyisela inzuzo engaphezulu komndilili. Ngamanye amagama, kuya kufuneka ulindele ukuhlawula ngaphezulu ngenkqubo eqinisekisiweyo ethi ivelise i-ROI enomtsalane.
Kuya kufuneka ke uvavanye iintlobo zeeasethi abathengisa ngazo ababoneleli. Umzekelo, ngaba ujonga irobhothi yorhwebo oluzenzekelayo elithenga ithengise iimali, okanye ngaba unomdla ngakumbi kwizinto ezifana nezo igolide, ioyile, kunye negesi? Ngale nto ithethwayo, kunokuba kufanelekile ukukhetha umboneleli okunika ukubonwa kwiiklasi ezininzi zeeasethi. Ngokwenza njalo, uya kuma elona thuba lifanelekileyo lokudala iphothifoliyo eyahlukeneyo.
Iindawo ezibonelela ngeyona ndlela zibalaseleyo ze2021
Ngaba ufuna ezona ziqonga zorhwebo zizenzekelayo ze2021, kodwa ungaqinisekanga ukuba ungaqala phi? Apha ngezantsi uyakufumana ababoneleli bethu abakumgangatho ophezulu okwangoku kwimarike. Njengamaxesha onke, qiniseka ukwenza olwakho uphando ngaphambi kokubhalisa!
Ababoneleli kurhwebo oluzenzekelayo bayakuvumela ukuba ufikelele kwiimarike zemali ngendlela engacacanga. Ngokuvumela ialgorithm ehambele phambili ukuba iphande kwaye ibeke intengiselwano egameni lakho, umela ithuba lokwenza inzuzo ngaphandle kokufuna ukwenza nawuphi na umsebenzi. Oku kuluncedo ngakumbi ukuba awunawo amava kwindawo yotyalo-mali, okanye awunalo ixesha lokurhweba.
Kwicala leflip, icandelo elinzima kukufumana iqonga lokurhweba ngokuzenzekelayo onokulithemba. Emva kwayo yonke loo nto, kulula ukwenza amabango anesibindi-ke kuya kufuneka ubenakho ukuqinisekisa ubunyani bomboneleli ngaphambi kokuba wohlukane nemali yakho. Ukukunceda apha endleleni, siye saxoxa ngamaqonga ethu aphezulu ezorhwebo ngo-2021. Njengamaxesha onke, qiniseka ukuba uyawenza umsebenzi wesikolo ngaphambi kokuba uqalise- njengoko uphando lubalulekile!
Ngaba amaqonga asimahla okuthengisa ngokuzenzekelayo akhona alungileyo?
Inkqubo yokuyila kunye nokwakha i-algorithm ekumgangatho ophezulu inokuthatha iminyaka emininzi ukugqibelela. Ngapha koko, itekhnoloji ifuna ukulungiswa rhoqo ukuqinisekisa ukuba iyakwazi ukugqwesa kwiimarike ngokungaguquguqukiyo. Unoko engqondweni, kutheni umboneleli wezorhwebo anganika iSauce yabo eyimfihlo ngaphandle simahla, xa ifuna umgudu ongaka wokwakha? Ngokusesikweni, ufumana oko uhlawulayo kwindawo yokuthengisa ngokuzenzekelayo.
Ngaba kufanelekile ukuba ndisebenzise umniki-ntengiso osekwe kwikhomishini?
Ababoneleli ngearhente esekwe kwiKhomishini ngabakufanele ukuba ujolise kubo. Kungenxa yokuba umboneleli uya kukhuthazeka ngokwasemalini ukuba akwenzele imali eninzi kangangoko. Kwangelo xesha, umboneleli akunyanzelekanga ukuba akhuphe ikhowudi yemvelaphi yealgorithm yorhwebo oluzenzekelayo, ke inokuqinisekisa ukuba izicwangciso zayo zihlala ziyimfihlo.
Yintoni iqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo?
Amaqonga orhwebo oluzenzekelayo ahlala egxile kwicandelo lophando lwenkqubo yorhwebo. Nje ukuba ithuba lokurhweba lifunyenwe yi-algorithm, iya kuthi emva koko ikuthumele ungeniso olufunekayo kunye namaxabiso okuphuma. Emva koko uya kuba noxanduva lokubeka urhwebo ngokwakho, kumthengisi okhethiweyo.
Ngaba ukurhweba ngeerobhothi kungathengisa ngam?
Ngokuqinisekileyo. Ukuba ubhalisa kunye nomboneleli onikezela ngenkonzo ezenzekelayo, lonke urhwebo luya kubekwa egameni lakho.
Uphando lwamaqonga ezinto ezizenzekelayo luzenza njani iimarike zezemali?
Itekhnoloji esisiseko ihlala ixhaswe bubuchwephesha obunje nge-AI kunye nokufunda komatshini, ecaleni kwezalathi ezininzi.
Zeziphi iiklasi zeeasethi ezijolise kumaqonga ezorhwebo?
Nangona uninzi lweerobhothi zokurhweba ngokuzenzekelayo zijolise kwiimarike ze-forex kunye ne-cryptocurrency, uninzi lweeklasi zokuvavanya ziyaxhaswa.
Ndihlawula njani iinkonzo zokurhweba ngokuzenzekelayo?
Oku kuxhomekeke kwimodeli yamaxabiso eqeshwe ngumboneleli. Umzekelo, ukuba usebenzisa iqonga elibiza ikhomishini, kuya kufuneka uhlangane nesixa esincinci sedipozithi, esiya kuthi emva koko songezwe kwityala lakho lokuthengisa. ukuba uthenga isoftware yobunini, kuya kufuneka uhlawule umrhumo omnye.